Friluftscafé - Dackestupet | Booqo Hultsfred
Bogga hore » Cun oo cab » Kafateeriyada » Friluftscafé - Dackestupet
Koonfurta Virserum waa xarumaha Dackestupet iyo Friluftscafé - Dackestupet. Xilliga jiilaalka meesha loo dalxiis tago iyo waqtiyada kale xarun loogu talagalay baaskiil wadista buuraha, MTB iyo socodka. Qolka kore, waxaad ka fureysaa qashin waffle ah. Ku raaxayso gofika iyo muuqaalka cajiibka ah ee bulshada Virserum iyo Virserumssjön. Meel safar fiican!
77 faallooyin ku saabsan Google
4/5 3 bilood kahor
Jid baraf ah oo wanaagsan iyo aragti wanaagsan oo ku wajahan Virserum.
Daawasho wacan laakiin qabow ayaa qarxay.
4/5 9 bilood kahor
Dejinta wanaagsan ee ka dhanka ah corona. Dackestupet ayaa ku habboon qoysaska u hamuun qaba inay tagaan.
5/5 9 bilood kahor
Aragti qurux badan oo qurux badan iyo kuwo geesaha fiican mara
Buuro reer fiican. Meelo aad u kala duwan oo hilib dubid ah.
2021-06-21T10:38:22+02:00Camping, Kafateeriyada, Kayak|
Makhaayadaha oo dhan